Toriteny Alahady 26 Mai 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 26 Mai 2013
JOBILY FANKALAZANA AN’ANDRIMANITRA NOHO NY FAHA 60 TAONA SAMPATI AFOMANGA 23 FJKM Amboniloha
“Dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambony alitara ka tsy avela ho faty” Lev 6 : 6
Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha , raha nanao heloka ny olona iray, na nanota teo anatrehan’Andriamanitra dia tsy maintsy manao fanatitra dorana mba hamitranam-pihavanana Aminy . Ny hevitr’ilay “afo mirehitra mandrakariva”dia mariky ny fihazonana ilay fihavanana amin’Andriamanitra mba tsy ho tapaka.
Fampiharana ny toriteny
Inona moa no ifandraisan’izany amin’izao taon-jobily izao ?
Jobily : Fahafoizana izay rehetra (vola , trosa , fananana , alahelo , fahatezerana, lolom-po , sns ……) mba hanavaozana ilay fihavanan’ny olona samy olona ary koa hamitranam-pihavanana indray amin’Andriamanitra.
Amin’izao andro iainantsika izao , tsy mangataka amintsika hanao fanatitra dorana intsony Andriamanitra fa mangataka antsika mba hamitram-pihavanana amintsika samy olombelona ka ahafoizantsika izay heverina ho trosa amin’ny endriny maro samihafa izay efa notanisaina vitsivitsy tery aloha.
Afo mirehitra = aoka isika hihazona ilay fihavanana sy fifankatiavana
Fehin’ny toriteny :
Tsy misy olona mahazo mihavana amin’Andriamanitra raha tsy vita fihavanana amin’ny rahalahiny. Ny tsy fanekentsika hamitram-pihavanana amin’ny rahalahintsika dia midika ho fandavantsika ny fihavanana amin’Andriamanitra izany hoe fanekena hihavana amin’i satana.
Fanalahidin’ny fidirana ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra ny :
Famitranam-pihavanan’ny olona samy olona
Famitranam-pihavanan’ny olona amin’Andriamanitra
RANDRIANARIZAY Lucien, Mpitandrina
Filoha SAMPATI foibe
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 28 mai 2013